किरणको ‘कर्म’ - Pardafas
मङ्सिर ११, २०७८
कात्तिकको दोस्रो साता होला एसएसपी किरण बज्राचार्यलाई भेट्दा उनी एउटा बिषयमा केन्द्रित थिइन् । उनका कुरासँगै उनमा देखिएको उत्साह सुन्नेका लागि पनि रोमाञ्चक र कौतुहुल बनाउँथ्यो । सुरक्षा रिर्पोटिङ गरिरहेको मलाई उनका कुराले तान्यो । अनि म बिस्तारमा उनको योजना सुन्न थाले ।
‘बुझ्नुभो दीपक जी, ललितपुरका मुख्य क्षेत्रहरु गुणस्तरीय क्लोज सर्किट क्यामराको निगरानीमा राख्ने,’ एसएसपी किरणका शब्द थिए, ‘यसको लिंकअप परिसर र मेट्रो (महानगरीय प्रहरी कार्यालय) समेतमा हुनेछ ।’
यतिकुरा गरिसकेपछि उनीसँग म उनको ‘कर्म’ ले आकार लिँदै गरेको कार्यकक्षमा पुग्यो । उनले कुनै कुशल ‘इन्टिरीयर’ ले जस्तै त्यो कार्यकक्षमा कहाँ के हुने सुनाउन थालिन् ।
‘यो कुनामा क्लोज सर्किट क्यामरा मोनिटरिङ युनिट हुन्छ,’ एसएसपी किरणले भनिन् ‘परिसरमा आउने सबै फोन कल रेकर्ड हुनेछन्, अब कम्तीमा १० मिनेटमा प्रहरी घटनास्थलमा पुग्नेछ । ’ उनको योजना अनुसार ‘कन्ट्रोल रुम’ मा आउने सुचना पास भएको केही मिनेटमा भेरिफाई भएर विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका प्रहरी युनिट मुभ हुनेछन् ।
उनका योजना सुनिरहँदा मेरो मनमा एउटै जिज्ञासा थियो । त्यो थियो– म्याडम किरण, प्रहरीमा प्रविधिमैत्रीको कुरा हुन्छ तर बजेट हुँदैन, त्यो कहाँबाट ल्याउँछौं ।
मेरो मनमा यहि प्रश्नले गाज्न नपाउँदै किरणको जवाफ आयो । लाग्थ्यो उनी मेरो मन पढिरहेकी छन् ।
‘अस्ती ग्लोबल आइएमई बैंकले टिभी दिएको छ, उनले भनिन् ,‘सुरक्षामा सरोकार राख्ने केही संघ संस्थाले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ’ उनको बृहत योजना अनुसार ललितपुरका सबै क्षेत्र (कम्तीमा अति संवेदनशील तथा घटना–दुर्घटना हुने स्थान) क्लोज सर्किट क्यामराको पहुँचमा बनाउने थियो । उनले कुरा पुरा भनिनन् तर एउटा कुरो फुस्काइन ‘महानगरका मेयर सापसँग शायद केही दिनमा यो योजनाका लागि सम्झौता होला (त्यो योजनाका बिषयमा उनलाई मैँले सोधिन्) ।
उनको ‘बिफ्रिङ’ मा अझै उत्साह थपिदैं थियो । कन्ट्रोल रुमको बाहिर ‘फिडिङ रुम (स्तनपान गराउने स्थान) र बाँकी बचेका कोठामा डिउटी खटिनेहरुका लागि शयनकक्षको व्यवस्था सहित उनको ‘हाइटेक कन्ट्रोल रुम’ को सपनाले पूर्ण आकार पाएको थियो ।
‘रातभर डिउटी गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई उचित स्नान र बच्चाहरुका लागि व्यवस्थित स्तनपान अनिवार्य हुनुपर्छ,’ किरणको जोडबल थियो,’ यहाँ (बाहिरको बार्दली देखाउँदै) त्यही बन्ने छ ।
रिर्पोटिङका लागि बर्षौदेखि ललितपुर परिसर गएका हामीहरुलाई भवनको माथिको थुम्को के हो ? भन्ने कहिले चासो भएन् । त्यहाँ के छ भन्दा कन्ट्रोल भन्ने जवाफ आउथ्यो । तर त्यही स्थानमा एसएसपी किरणले आफ्नो ‘कर्म’ को अमिट छाप छाडेर गइन् ।
तर, उनले त्यो ‘कर्म’ उपभोगगर्न नपाउँदैं उनी परिसरबाट बाहिरीइन । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरस्थित उनकै कार्यकक्षमा भएको त्यो भेट आज आएर परिसर प्रमुखको रुपमा अन्तिम भएको छ ।
उनले आफ्नो कर्मको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी उत्तमराज सुवेदीसहित मनकारी उद्यमीहरुका हातबाट उदघाटन गराइन् ।
परिसरको रेकर्ड अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले थ्री केभिए युपीएस, १६० एच ब्याट्री, एफएक्सओ र हेडफोन सहयोग गर्यो । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष रत्नराज बज्राचार्यले १० थना एलइडी टिभी सहयोग गरे । यस्तै ललितपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ र सुमेरु समूहका भरत महर्जनले भौतिक संरचना निर्माण र फर्निसिङमा सघाए ।
एसएसपी किरणको ‘कर्म’ मा सघाउनेमा स्टार अस्पतालका अध्यक्ष अशोककुमार महर्जन, बीएण्डबी अस्पतालका अध्यक्षद्वय डाक्टर जगदिशलाल वैद्य र अशोककुमार बाँस्कोटा हुन् । उनीहरुले कन्ट्रोल रुमका लागि आवश्यक एनभीआर, नेटवर्क स्विच र एचडीएमआई जस्ता उपकरण सहयोग गरे ।
जोन्टा क्लब अफ काठमाडौंकी अध्यक्ष सीमा गोल्छाले ६ थान कम्प्युुटर र ल्यापटप सहयोग गरिन् । यस्तै अरुणिमा बचत तथा श्रृण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रामशरण घिमिरेले १४ थना कुर्सी सहयोग गरेर परिसरमा आफ्नै सुरक्षाका लागि निर्माण भएको स्मार्ट कन्ट्रोल रुममा सहभागी गराए ।
महानगरी प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखको हैसियतमा डीआईजी सुवेदीले सहयोग गर्ने महानुभावलाई प्रशंसा पत्र दिए । किरणको यो ‘कर्म’ को उनले प्रशंसा गरे । योसँगै किरण पनि ललितपुरबासीको मन जितेर त्यहाँबाट बिदा भएकी छन् ।
तर, के यति रहर, परिश्रम, आग्रह, अनुरोधसहित आवश्यकता पुष्टि गरेर उनले नेपाल प्रहरीका लागि बनाएको यो संरचनाको परीक्षण, प्रयोग र प्रभावकारिता हक भोगको अधिकार एसएसपी किरणलाई थिएन र ?
के उनले यसमा केही कमजोरी देखिए सच्चाएर अझै गजब बनाउने थिइनन् र ?
उठ्नेहरुको मनमा कुरो उठ्ला, किरणको गुनगान गायो । भने भनौं, उनको र उनीजस्ताको ‘कर्म’ को गुणगान गाउनुपनि अरुलाई उत्प्रेरित गर्ने यन्त्र हो ।
अब, एसएसपी किरण त संगठनको आदेश मानेर भनेकै ठाँउमा गइन् । तर, उनलाई परेको प्रभावले अरुको मन यस्तै हौसिएला त ?
प्रहरी किन झन्झन् कमजोर र दवाब तथा प्रभावमा पर्दैछ भने एउटा उदाहरण त यो पनि हो, होइन र ? कि कसो त ।
#ठोको ताली !
फाल्गुण २, २०७८
buy cialis 40mg generic - otc cialis buy tadalafil 10mg online
cialis 40mg pill - tadalafil 40mg usa order tadalafil 10mg
फाल्गुण ५, २०७८
purchase plaquenil online - hydroxychloroquine 400mg oral buy hydroxychloroquine 200mg generic
फाल्गुण ६, २०७८
ivermectin 6mg otc - buy ivermectin3mg online stromectol south africa
फाल्गुण ७, २०७८
cephalexin ca - purchase erythromycin sale erythromycin tablet
फाल्गुण ८, २०७८
fildena cost - buy tamoxifen order antabuse pills
फाल्गुण ९, २०७८
purchase budesonide sale - budesonide us buy cefuroxime 500mg sale
फाल्गुण १०, २०७८
cheap careprost - purchase bimatoprost pill generic trazodone 50mg
फाल्गुण १३, २०७८
tadalafil 10mg oral - purchase cialis without prescription ivermectin 12mg stromectol
फाल्गुण १४, २०७८
order cialis 5mg pill - cost of ivermectin lotion pills for ed
फाल्गुण १५, २०७८
online casinos usa - slots meaning purchase prednisone generic
फाल्गुण १६, २०७८
prednisone 10mg without prescription - cost accutane isotretinoin 40mg pills
फाल्गुण १७, २०७८
amoxil 1000mg price - order amoxicillin generic oral viagra 150mg
फाल्गुण १८, २०७८
tadalafil 5mg drug - cialis without prescription tadalafil 20mg usa
फाल्गुण १९, २०७८
ivermectin3mg for people - zithromax sale zithromax pills
buy azithromycin 500mg without prescription - methylprednisolone 8 mg over counter medrol4mg tablet
baricitinib 4mg us - order dapoxetine 90mg sale purchase priligy pill
फाल्गुण २४, २०७८
metformin 1000mg canada - metformin 500mg cheap generic lipitor 80mg
amlodipine 5mg sale - prilosec 20mg price omeprazole 20mg tablet
buy metoprolol pills - cialis 20mg cheap tadalafil online order
brand cialis - sildenafil withoutadoctor's prescription viagra cost
ivermectin generic cream - ivermectin rx ivermectin6mg over the counter
buy clomid 50mg sale - zyrtec 10mg pills zyrtec for sale
चैत ३, २०७८
desloratadine without prescription - desloratadine 5mg for sale aristocort 4mg tablet
cytotec canada - buy misoprostol 200mcg pill synthroid 150mcg canada
sildenafil pill - buy neurontin generic buy gabapentin 600mg pills
levitra or cialis - buy cenforce without prescription cenforce sale
order diltiazem 180mg generic - purchase diltiazem online cheap zovirax tablet
order hydroxyzine online cheap - hydroxyzine cheap order rosuvastatin without prescription
order zetia 10mg online - order generic domperidone cost citalopram 40mg
viagra 150mg tablet - sildenafil pills 200mg flexeril 15mg canada
order sildenafil 50mg pill - cialis over the counter buy tadalafil 5mg sale
ketorolac cheap - order tizanidine 2mg without prescription order ozobax sale
viagra 200mg price - order methotrexate pills buy plavix 75mg pill
viagra over the counter - order clopidogrel sale plavix 150mg over the counter
best viagra sites online - sildenafil 150mg brand sildenafil 100mg cheap
esomeprazole 40mg usa - order nexium 20mg for sale buy promethazine for sale
cialis for sales - Real cialis without prescription cialis 40mg brand
buy provigil pill - canadian pharcharmy buy ed pills
buy accutane for sale - purchase amoxicillin azithromycin 500mg pill
order lasix 100mg generic - order lasix 40mg generic buy viagra 50mg sale
tadalafil india - cialis 20mg for sale brand viagra 50mg
cialis 20mg brand - order tadalafil 5mg online cheap order warfarin generic
order topamax 100mg online cheap - purchase topamax sale buy imitrex for sale
dutasteride medication - tadalafil 40mg cost cialis 10mg sale
cheap sildenafil without prescription - viagra overnight buy cialis 5mg pills
mens ed pills - prednisone 10mg ca oral prednisone 10mg
order accutane 10mg - amoxicillin 1000mg ca order amoxil 500mg generic
ब‌ैशाख १, २०७९
purchase lasix - buy furosemide 100mg generic purchase azithromycin generic
buy generic doxycycline - purchase plaquenil generic chloroquine tablet
ब‌ैशाख ९, २०७९
tadalafil 5mg sale - sildenafil canada cheap viagra sale
ब‌ैशाख १०, २०७९
order provigil 100mg generic - order provigil 200mg generic viagra pills
ब‌ैशाख ११, २०७९
blue pill for ed - prednisone 10mg us prednisone drug
ब‌ैशाख १२, २०७९
order isotretinoin - order amoxil celebrex 100mg price
ब‌ैशाख १३, २०७९
tamsulosin us - buy zofran purchase spironolactone pill
ब‌ैशाख १४, २०७९
buy generic zocor 10mg - academicwriters custom dissertation services
ब‌ैशाख १६, २०७९
casino slots - free online slot machines help me writeathesis
ब‌ैशाख १७, २०७९
casino slots gambling - casino online real money purchase ampicillin for sale
ब‌ैशाख १८, २०७९
order ciprofloxacin 500mg online cheap - cipro 500mg usa buy tadalafil 10mg without prescription
ब‌ैशाख १९, २०७९
order viagra sale - cheap viagra for sale generic vardenafil from canada
ब‌ैशाख २४, २०७९
order prednisolone 10mg - buy neurontin 600mg buy generic cialis 40mg
augmentin 375mg tablet - tadalafil pill tadalafil 10mg pills
bactrim over the counter - order bactrim 480mg for sale sildenafil 50mg brand
cephalexin 500mg pill - cheap erythromycin buy erythromycin 500mg for sale
buy sildenafil 50mg sale - generic name for stromectol ivermectin 3mg over counter
brand modafinil 100mg generic modafinil purchase modafinil pill
budesonide usa - purchase budesonide generic order antabuse 250mg generic
purchase provigil sale purchase provigil pills
purchase provigil without prescription modafinil 100mg pill purchase modafinil sale
provigil 100mg price purchase modafinil pills
ceftin online order - cost robaxin oral cialis 10mg
generic modafinil 200mg modafinil 200mg usa
order provigil 100mg pills modafinil cost
ampicillin for sale online - cheap tadalafil pill cialis 20
modafinil 200mg canada provigil pills
purchase modafinil provigil 100mg us provigil 200mg cost
purchase amoxicillin for sale - order vardenafil 20mg vardenafil for sale online
कर्णालीमा चाडपर्व सुरक्षा : हरेक जिल्लामा कमाण्ड सेन्टर, चार हजार प्रहरी परिचालन
ओम्नीको खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको पत्र
वाग्मती प्रदेशकै उत्कृष्ट बन्यो सिन्धुली प्रहरी
कांग्रेस महाधिवेशन : दोस्रो चरणको लागि मतदान सुरु